Virtual Yekutenga Mubatsiri: Inotevera Hukuru Kuvandudza muEcommerce? | Martech Zone
Ndi2019 uye unopinda mune chitoro-uye-dhaka chitoro chekutengesa. Kwete, uku hakusi kuseka, uye handiyo punchline. ECommerce inoenderera ichitora kuruma kukuru kubva payi yekutengesa, asi pachine zviitiko zvisingaenzanisike kana zvasvika pakuvandudza uye nyore kwezvidhinha nedhaka. Imwe yemiganhu yekupedzisira kuvepo kweanoshamwaridzika, anobatsira shopu mubatsiri.
"Ndingakubatsire sei?" chimwe chinhu chatajaira kunzwa patinopinda muchitoro, uye takazvitora sezvisina basa. Kune yega yega intuitively yakaiswa-kunze eCommerce webhusaiti iyo inosanganisira UI-inoshamwaridzika maficha senge AI auto-yakazara kana breadcrumb yekutsvaga mhedzisiro, kune zvimwe zvakawanda izvo, kuti zvive zvisina kujeka, zvakayamwa zvakakwana Chingave godend kuva neushamwari shop mubatsiri kubuda uye kubvunza mashoma akareruka mibvunzo nezve zvandiri kutsvaga. Zvingaitwe online? Ichi chinyorwa chichatarisa mikana iripo uye kugovana mamwe maturusi, matipi, uye mazano.
Maitiro ekubatanidza pamwechete yako wega mubatsiri
Kunyange vabatsiri vekutenga vari mukusimudzira, chirongwa chinozonzwa munhu kune vatengi vako hachinyatso kusvika - kana mubhajeti. Nekudaro, hazvina kunyanya kuoma kusanganisa zvikumbiro zvakasiyana siyana kuti upe vashanyi vako kuravira kwezvakanakisa maficha emubatsiri wekutengesa pasina yakawandisa splurge.
MuFacebook Messenger, Sephora anogona kuzviita zvese.
Chatbots hachisi chinhu chitsva, asi yavo UX yakavandudzika uye kunyorera kwavo kwakasiyana. Mazuva ano zviri nyore kuwana zvekugadzira nekubatanidza chatbots mune ako mashandiro.
Facebook Meseji: Iwe unoziva vatengi vako vari kupururudza kuburikidza neyavo Facebook feed hafu yezuva; nei uchivaita kuti vasiye application kana vachida chimwe chinhu kubva kwauri? Kuva nehurongwa hwekusvitsika zviri nyore mhando kuita sekunge uine-panhare wega mubatsiri - uye pachinzvimbo chekufamba uchienda kune webhusaiti yako, kukutumira mameseji paFacebook zvinoita kuti zvinzwe sekunge vari kutaura nemunhu. Sephora anga achitungamira kubhadharisa kune ramangwana munyika yerunako, aine maviri akasiyana chatbot maficha mukati meFacebook Messenger achishandisa Assi.st: Vatengi vanogona kuvatumira mameseji kuti vagadzire musangano neanachipangamazano werunako, kana ivo vanogona kuwana rairo pakutenga zvisarudzo.
Kuhodha chikafu chekutora kana kuendesa chakatora zvakare muFacebook Messenger nyika. Starbucks angori mameseji mashoma kubva pakuvepo kunotora kuchitoro chako chemuno, Dominos inogona kukuudza zuva nezuva dhizaini, uye Pizza Hut inoita kuti iwe upedze iyo yose yekuraira ruzivo usina kana kusiya Facebook. Izvi zvese zvinoitwa uchishandisa akasiyana chatbots ane chiitiko chakafanana sepaya paunotaura neshamwari.
Vatengi Service: i
Kushandisa chatbots kubatsira vatengi vako nemibvunzo yebasa revatengi zvakangofanana nekuva nemubatsiri wega wega asingarari. Ivo havazokwanise kubata zvinhu zvakakura, asi kugadzirisa zvinhu zvidiki zvinogona kutora huremu kubva pamafudzi ako epasi. Yakatumidzwa zita, sevhisi senge Chat Bot inogona kushandiswa kugadzira zvirinyore zviitiko zvako, mibvunzo, uye zviito - kwete zvakanyanya maBandersnatch matanho ekuomarara, asi zvinoita kuti basa riitwe Iyo ine yakakwira mwero yekudzoka, zvakare: Mukuyedza, yekukurukura bot yakakwanisa gadzirisa 82% yekudyidzana pasina kudiwa kwemumiriri wemunhu.
MongoDB ine chatbot yebasa revatengi seiyi, iyo inokwanisa kuona kana mushanyi ari mutungamiriri anokwanisa nekubvunza mibvunzo mishoma, uye kana vakadaro, vatungamire kune chaiyo yekutengesa rep. Sephora anoita kumwe kuratidzika munhandare iyi - uri kushamisika here kuti vari mumutambo webasa revatengi ve chatbot? Pawebhusaiti yavo, kwete chete iwe unogona chete kubvunza yakakosha mibvunzo - iwe unogona kunyange kuwana ekugadzira mazano kubva kuAI yavo. Vatengi vanokwanisa kuongorora pikicha yechitarisiko chavanoda kubva chero kupi uye kuwana mazano pane izvo zvekutora kuti utarisise chitarisiko.
Kugutsa vashanyi vako kuti vatore maemail kubva kwauri harisi basa riri nyore - ko kana chatbot ichigona kuvagombedzera iwe, uye kungovatumira chaizvo izvo zvavanoda kuona? Ndozvinonzi neTechCrunch's bot inoda kuti iite, pasina imwezve yekuedza kune iyo yekunyorera zvachose. Kana muverengi achinyorera nhau dzemunhu akasununguka achishandisa chatbot sevhisi, software yayo yeAI yobva yachengeta mhando yerudzi rwenhau dzavanoverenga vovatumira zvinyorwa chete zvavanofunga kuti vangafarire.
Rega StitchFix iedze kukuziva iwe zvirinani kupfuura iwe zvaunoziva iwe pachako
Kuivaka mune rako bhizinesi modhi
Hazvingave zvakanaka here kana vatengi vako vakagara vachinzwa sekunge vari kuwana rubatsiro kubva kwauri? Kune makambani mashoma nemaindasitiri akakwanisa kuvaka manzwiro emubatsiri akasarudzika mune yavo bhizinesi modhi.
Chikamu chey equation yeakabudirira kunyoreswa bhokisi iri kutsvaga izvo vatengi vako vanofarira kuti uvatumire iko chaiko chinhu. Stitchfix'' modhi inodzika zvachose pakuita kuti vatengi vataure Stitchfix zvavanoda, saka Stitchfix inogona kuvatumira zvinhu zvavanogona kuda. Uku ndiko kuita kwemunhu kunonzwa kwakasarudzika, sezvo munhu wega wega ari paired neyemunyori stylist mushure mekuzadza hefty yakazara quiz. Vatengi vanobhadhara mubhadharo kuti vanyore, iyo inobviswa kana vakachengeta kana chimwe chete chezvinhu zvakatumirwa kwavari.
Nekudaro, hapana bhizinesi raigona kuita purofiti nema stylist ako akatarisa pamusoro peumwe neumwe chimiro uye nekugadzirisa kuburikidza nehukuru hombe katarogu yezvinhu. Vanhu vanotyisa nekukurumidza uye zvinobudirira kugadzirisa huwandu hwakawanda hwe data uye kuita sarudzo - iri ibasa rehungwaru hwekunyepedzera. AI ndeyekuti Stitchfix inokwira zvakadii, iine algorithm yayo ichitarisa mafambiro, zviyero, mhinduro, uye zvido zvekudzikisa pasi runyorwa rwemazano ezve stylist kusarudza kubva. Iyo AI inobatsira iyo stylist, uyo anozobatsira mutengi mune yechokwadi tech-kuwirirana kwevanhu.
Kana Iwe Wakafarira Izvo, Unogona Kuda…
Wechokwadi stylist wega anoziva zvaunoda uye nezvawakatenga, uye anoshandisa iyo ruzivo kuratidza zvimwe zvinhu zvaungade. Hazvina kuomera njere dzekunyepedzera kutevedzera iyo "dai iwe wakazvida izvo, ungafarire izvi" mazano akasarudzika. Hafu yehondo iri kutora vatengi kusaina kuti iwe ugone kuunganidza yavo data, uye imwe hafu iri kunyatso kushandisa iyo data. Ndiani anoita basa rakakura reizvi? Iwe wakazvifungidzira. Amazon.
Amazon inoziva kuti 60% yenguva, mumwe munhu akatarisa Keurig kofi mugadziri akatarisawo zvinoraswa K-Makapu, uye pamwe nemikombe chaiyo yekunwa kofi ichibuda. AI inoitei? Inokurudzira izvo zvigadzirwa kune wese munhu anotarisa kune Keurig. Izvo zvakaita sekunge uine chaicho mubatsiri ari kugara achiedza kufungidzira zvaunoda zvichibva pane zvawakatsvaga, zvauri kubaya, uye zvakaitwa nemamirioni nemamiriyoni evamwe vanhu mune ako mamiriro.
AI inogona kukubatsira iwe kuti uwane chako chakakwana chigadzirwa?
Vatsvagiri uye vanogadzira vari kugara vachiedza kupindura mubvunzo: Tinogona here kuita chaiyo chaiyo yekutenga mubatsiri? Parizvino, pane maviri anonakidza maficha anosvika padyo padyo.
Imwe ndeye Macy's On-Call, yaishamisa pamberi payo nguva, uye zvakare inosanganisa AI uye chaiyo yekutenga maficha maficha pamwe nekushanyira chitoro-uye-dhaka chitoro. Kana vatengi vakashanyira chitoro chaMacy, vanogona kusvetukira parunhare rwavo uye nekuwana iro basa reOn Call kuti vabvunze mibvunzo nezvezvinhu, kuraira kwavakaisa, kana kutowana mafambiro ekuenda kune rimwe dhipatimendi. Zvese zvavanofanirwa kuita kutaipa mumibvunzo uye vanowana mhinduro ipapo ipapo.
Macy's On-Call yakaedzwa kunze muzvitoro gumi, asi haina kufambira mberi zvakanyanya kupfuura ipapo. Nekudaro, zvaiita senge zvinovimbisa, uye ivo vakabatana na IBM Watson. Nekuda kwekuwedzera kwekurumbira kwekushandisa chatbots, imari yekudyara iyo inogona kuvabhadharira ivo mune ramangwana, uye zvakakodzera kuyedza kuteedzera kune chaiyo eCommerce chitoro.
Nekudaro, iyo yazvino uye yakakura kuvandudza iapp inonzi Elly. Elly ndicho chinhu chepedyo chiripo kune chaicho chakangwara chaicho chekubatsira mubatsiri - zvisinei, iye achiri muzvikamu zvekusimudzira. Iye AI anobatsira vatengi kuwana yavo chaiyo chigadzirwa kuburikidza nekubvunza yakateedzana mibvunzo, kuenzanisa maficha, mutengo, uye chero chinhu icho mutengi anoti ivo vane hanya nazvo. Ari mumatanho ekuyedza panguva ino, asi iwe parizvino unogona kukumbira rubatsiro rwake nekutsvaga yako yakanaka smartphone kana iwe uchida kuravira kweramangwana.
Mubatsiri wega anoziva bhizinesi ravo mukati nekunze. Ivo zvakare vanovavarira kuziva rwakanyanya ruzivo rwakanangana nezvevatengi vavo sezvinobvira, kuvabatsira kuita smart kutenga sarudzo uye kusiya kugutsikana (uye, chokwadika, dzokera kune zvimwe). Chekupedzisira, ivo vanoda kuti izvi zviitike nenzira yechisikigo uye inoshanda.
Dambudziko rekushandisa vabatsiri vevanhu nderekuti havagone kukwira zvine mutsindo uye vanoshandisa yakawanda data nenzira ine chinangwa. Iyo ramangwana revabatsiri vekutenga ndeyokubatanidza kubatsira uye kuita kweumwe munhu mubatsiri aine simba-dhonza simba uye nekumhanya kwehungwaru hwekunyepedzera. Chishandiso chimwe hachigone kuzviita zvese (zvakadaro), asi kusanganisa zvishandiso zvishoma zviripo izvozvi zvinogona kuvhura nhanho nyowani dzekushanda kwemabhizinesi eCommerce
Tags: chatbotDomino'sellyfacebook messengerh & mMongoDBstylist wegasephora
Jake Rheude ndiye Director weKushambadzira weRed Stag Kuzadzikiswa, ecommerce yekuzadzisa imba yekuchengetera iyo yakazvarwa kunze kweecommerce. Ane makore eruzivo mune ecommerce uye bhizinesi kukura. Munguva yake yekusununguka, Jake anonakidzwa nekuverenga nezve bhizinesi uye nekugovana ruzivo rwake nevamwe.